Saraakiisha AMISOM iyo Kenya oo ku sheekeystay Video Conference - Daawo - iftineducation.com
iftineducation.com – Saacado kadib markii Golaha Ammaanka uu ballaariyay howl galka AMISOM, isla markaana ku kordhiyay tirada Ciidamada AMISOM ee haatan gaareysa 12-kun askari la gaarsiiyay 17,700 askari ayaa Saraakiisha AMISOM iyo Kenya markii u horeysay wada hadal ku qaaday qadka Isgaarsiinta ee maqalka iyo muuqaalka ee la yiraahdo video conference.
Hogaanka ugu sareeya AMISOM Major Fred Mugisha, Kuxigeenka Wakiilka Midowga Afrika.
Wafula Wamunyinyi iyo Saraakiisha Kenya sida Afhayeenka Milateriga Col. Cyrus Oguna, Major Emmanuel Chirchir iyo Saraakiisha Wasaarada Gaashaandhiga Kenya ayaa kaga munaaqishooday howl galada Milateri ee ka socda Gobolada Koofurta Soomaaliya, iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka Shabaab.
Saraakiisha Sar sare ee AMISOM ayaa qadkan video conference kaga qeyb qaadanayay iyagoo ku sugan Xarunta Xalane oo xilligan ah Taliska ugu weyn ee aad loo ilaaliyo, iyo sidoo kale Saraakiisha Kenya oo iyana Nairobi kaga qeyb qaadanayay qadkan maqalka iyo muuqaalka.
Labada dhinac ayaa soo dhoweeyay go’aanka Golaha Ammaanka ee awooda ugu ballaariyay AMISOM, in Gobolada Koofureed tagi karaan, iyo in 4,700 Askari Kenyan ah ay howl galka AMISOM ku soo biiraan.
Hogaanka sare AMISOM Major Fred Mugisha ayaa sheegay in sanad ka hor Al-Shabaab ay meelo badan maamulayaan, halka Dowladda KMG iyo AMISOM kaga sugnaayeen Caasimada Muqdisho goobo kooban.
Mugisha ayaa sheegay in Al-Shabaab ku jebiyeen dagaalada, isagoo xusay in 300-ka mid ah dagaalyahanada Ajaaniibta ay bilaabeen inay u qaxaan dalka Yemen oo ay doonyo ku baxsadaan sida uu yiri.
Waxaa uu sheegay in furimaha dagaalka ay soo gelinayaan caruur yar yar oo ay soo qaldeen, isla markaana aanay u babac dhigi karin.
Afhayeenka Milateriga Kenya Col. Cyrus Oguna ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ku wiiqeen awoodooda Gobolada Jubooyinka, isagoo xusay in qorshahooda dhow uu yahay sidii ay u qabsan lahaayeen Magaalada Kismaayo ee Xarunta Jubada Hoose.
Wada hadaladan khadka taleefanka maqalka iyo muuqaalka ee video conference oo ahaa kii u horeeyay ee AMISOM iyo Saraakiisha Kenya dhex mara ayaa ku soo beegmaya xilli Al-Shabaab shalay lumisay Magaalada Baydhabo oo ah magaalo istiraatiiji ah oo ku taal Koofur Galbeed Soomaaliya, markii kumanaan ka tirsan Ciidamada Itoobiya la wareegeen saddex sano kadib.
Al-Shabaab ayaa culeysyo baaxad leh ka soo fuulay Gobolada Koofurta Soomaaliya, oo aagag cusub dagaal ay kaga fureen Ciidamada Kenya, kuwa Itoobiya oo ka soo tallaabay xuduuda, iyagoo ka qabsaday dhowr deegaan muhiim ahaa.